Xarun Caafimaad casri ah oo laga furay BOSASO iyo Qalabka CT SCAN – VIDEO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Xarun Caafimaad casri ah oo laga furay BOSASO iyo Qalabka CT SCAN – VIDEO
Xarun Caafimaad casri ah oo laga furay BOSASO iyo Qalabka CT SCAN – VIDEO
October 6, 2016 - By: Khalid Yusuf
Magaalada Bosaso ee dalka Soomaaliya waxaa laga furey isbitaal casri ah oo ku shaqeeya qalabii ugu danbeeyey ee caalamka laga isticmaalo. Isbitaalka waxaa furey Dr. Maxamed Cabdixaliim Cismaan oo ah dhakhtar wax ku bartey dalka Maraykanka. Isbitaalka oo lagu magacaabo Horn of Africa Medical Center waxa uu si toos ah ugu xiran yahay Isbitaal kale oo ku yaala dalka Maraykanka, halkaas oo baaritaanka lagu sameeyo Bosaso si deg-deg ah markiiba loogu gudbiyo Matraykanka jawaabta qofkana la siiyo iyo dhibaatada uu sheeganayo.
Kala xiriir; Telefoonada ah: 829874/0907 728290/616 6999
Sawirada goobta iyo warbixinta dhakhtar Maxamed Cabdixaliim hoos ka eeg-
Waxaa dhowaan laga hirgaliyey magaalada Bosaso xarun iyo qalabka baaritaanka caafimaad oo casri ah ee CT Scan ama Sawirada Guud ee jirka kaasi oo aan horay u oolin dalka.
Dr. Mohamed Abdihaliim oo ah maamulaha xarunta Horn of Africa Medical Center ayaa ah dhakhtar ku takhasusay baaritaanada caafimaadka gaar ahaan cilmiga Neuroradology, Whole body imaging, iyo Emegergency Radiology.
Dr. Abdihaliim oo wax ku bartay waddanka Maraykanka ayaa Horseed Media u sheegay in Xaruntan caafimaad iyo qalabka CT Scan-ka ah ee yaallaba ay dabooli doonaan baahi aad u wayn oo kor u qaadi doonta kobcinta caafimaadka shacab waynaha ku dhaqan Bosaso iyo Puntland guud ahaan.
Dhakhtarku waxa kale oo uu intaa raaciyey in shaqaalaha xarunta ka howlgala ay leeyihiin xirfado kala duwan oo ay ka faa’iidi doonaan dhamaan dadwaynaha iyo goobaha caafimaad ee Maglaada Bosaso.
Dhakhtarku waxa uu sheegay in haddii la ogaado dhaawaca ama xanuunka qofka haya, ay aad u fududdahay in la daweeyo. Adeegan caafimaad ayey horey loogu raadsan jiray dalka dibadiisa.
Qaar kamid ah shacabka oo Horseed Media u warramay ayaa sharraxaad ka bixiyey sida ay ugu faraxsan yihiin xaruntan caafimaad iyo howlaha ay soo kordhisay.
Waxaa hubaal ah in laga kaaftoomi doono safarradii dhaadheeraa ee loo aadi jiray magaalooyin kale oo laga helo adeegga CT Scan ka. Safarradaas dhaadheer oo uu qofka bukaanka ah kala kulmi jiray dhibaatooyin badan
Dhinaca kale maamulaha Bosaso General Hospital, Abduhllahi Sicid Aw-muse, ayaa inoo sheegay in baahi wayn loo qabay CT Scan lagu baaro xanuunnada halista ah sida Kansarka (Cancer), cudurrada madaxa iyo dhammaan xubnaha qofka.
Madaxa xaruntan Cusub ee caafimaadka Dr.Mohamed Abdihalim ayaa horey uga soo shaqeeyey isbitaalada dalka Maraykanka, hoos ka daawo isagoo faah faahin ka bixinaya takhasuskiisa iyo xogta ku aadan baaritaanada caafimaadka ah ee casriga ah.
Horn Africa Medical Center
Faafin: Horseed Media